Kusimaha madaxweynaha Galmudug oo ka hadlay arrimo quseeya maamulkiisa (akhriso warbixin)
Home » WARARKA MAANTA » Kusimaha madaxweynaha Galmudug oo ka hadlay arrimo quseeya maamulkiisa (akhriso warbixin)	Kusimaha madaxweynaha Galmudug oo ka hadlay arrimo quseeya maamulkiisa (akhriso warbixin)
20/03/2017	488 Views Madaxweyne-ku-xigeenka Galmudug ahna kusimaha madaxweynaha ayaa ka warramay diyaar-garowga loogu jiro qabashada doorashada madaxtinimada maamulkaas.
Mudane- Maxamed Xaashi oo warbaahinta la hadlayay ka dib kulamo uu magaalada Muqdisho kula qaatay madaxda dowladda ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo madaxdu ay ka wada hadleen arrrimo badan oo quseeya Galmudug.
Arrimaha ay labada dhinac ka wada-hadleen ayaa waxaa ugu weynaa qabashada doorashada madaxtinimada Galmudug, waxaana uu kusimaha madaxweynuhu tilmaamay in doorashadu ay dhawaan dhici doonto.
Hadalka mudane- Maxamed Xaashi ayaa waxa uu imaanayaa xilli uu ra’isul-wasaaraha dalka mudane- Xasan Cali Kheyrre shalay soo-jeediyay in 40 maalmood dib loo dhigo doorashada Galmudug, si waqti loogu helo ka-guul-gaarista dadaallada wax looga qabanayo abaaraha ka jira deegaanno badan oo dalka ka mid ah, oo ay Galmudug qeyb ka tahay.
Previous: XOG CULUS: Xildhibaannada beelaha qaar oo la-kulankooda uu qaali noqday
Next: Ciidamada amniga oo ka farxiyay dadka ku nool Yaaqshiid